ကာတွန်း သီဟ (စခန်းသစ်) – အစိုးရသစ်မှာ …. | MoeMaKa Burmese News & Media
ကာတွန်း သီဟ (စခန်းသစ်) – အစိုးရသစ်မှာ ….
One Response to ကာတွန်း သီဟ (စခန်းသစ်) – အစိုးရသစ်မှာ ….
Star Wraith on February 3, 2016 at 7:24 pm
နှလုံးသာ မရှိတာ။ပါးစပ်က အကြီးကြီးပဲ။